အိန္ဒိယ-မြန်မာ-ထိုင်း သုံးနိုင်ငံ အဝေးပြေးလမ်းမ ဖွင့်လှစ်ရန် ဆွေးနွေးနေ
မြန်မာနိုင်ငံအား ဖြတ်ကာ အိန္ဒိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆက်သွယ်မည့် အဝေးပြေးလမ်းမ တည်ဆောက်ရန် သုံးနိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟု အိန္ဒိယသတင်းစာတစ်စောင်က ရေးသားထားသည်။ ကီလိုမီတာ ၁,၄၀၀ ရှည်လျားမည့် အဆိုပါလမ်းသည် အိန္ဒိယနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသကို ပထမဆုံး ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်ကာ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးများကို အထောက်အကူပြုမည်ဟု Business Today သတင်းစာက.
ကျူးကျော်ပြဿနာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ စတင်ကိုင်တွယ်
အစိုးရက ကျူးကျော်များကို အမျိုးအစားလေးမျိုးသတ်မှတ်ထားရာ အမှန်တကယ်ကျူးကျော်ခြင်း၊ တဆင့်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သည့်ကျူးကျော်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ကျူးကျော်ခြင်း၊ မင်းမဲ့စရိုက်ပုံစံကျူးကျော်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ကျူးကျော်ခြင်း ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေ
ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်တို့မှ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်
ကျွန်မရွာမှ အမျိုးသမီးများ ပြောပြသည့် သူတို့ အတွင်းရေး
ရှမ်းပြည်နယ်မှ အသက်မပြည့်သေးသော မိန်းကလေးများသည် ထိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သို့ လိင်လုပ်သားအဖြစ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဓာတ်ပုံနှင့် စာသား – ရှင်မြင့်မိုရ် ဓာတ်ပုံဆရာ ရှင်မြင့်မိုရ်သည် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းရှိ ကျိုင်းတုံမြို့တွင် နေထိုင်သည်။ ယင်းဒေသသည် မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော ရွှေတြိဂံဒေသတွင်.
Shin Myint Mo ရေးသားသည်။
ဇွဲကောင်းလှတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုထင်ကျော်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူရဲ့ နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကို ပြန်လည်စဉ်းစားတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျော်ဖုန်းကျော် ရေးသားသည်။ သမ္မတနေရာအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးထင်ကျော်ကို အမည်စာရင်းတင်တော့ နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ စီအင်န်အင်န်က လှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့ ကိုထင်ကျော်နဲ့ မှားပြီး သတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက နားလည်နိုင်တဲ့ အမှားပါ။.
ဖားကန့်တွင် မြေပြိုမှုကြောင့် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြား ပျောက်ဆုံးနေ
ဖားကန့်တွင် မြေပြိုမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြား ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက မေ ၂၄ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်သည် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိသည့် ထိုဒေသတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မြေပြိုကာ လူသေမှုဆုံးမှု ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်က ကတိတည်မည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြား
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းသွားမည်ဟု ဂျွန်ကယ်ရီနှင့် နေပြည်တော်တွင် မေ ၂၂ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရွှေတိဂုံမှာ အောင်မြေ လာပြန်နင်းတဲ့ လက်စတာ
ဗုဒ္ဓ ဘာသာထုံးတန်းအစဉ်အလာအရ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို နမောတဿ ရွတ်ဆိုပူဇော်ကန်တော့ခဲ့ကြသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အံ့အားသင့်ဖွယ် ပြောင်းလဲမှုများကို ဂျွန်ကယ်ရီချီးကျူး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုများကို ခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံသွားမည်ဟု ဂျွန်ကယ်ရီက ပြောကြား